Djibuuti:-Wada hadalku iyo in bani aadamku uu ka wada xaajoodo waxa dhexyaal waa mabda’ caalami ah, waxaana ku dhisan nolosha. Isla markaasna waxaana la oron karaa waaba meelaha aynu xayawaanka intiisa kale kaga duwan nahay. Intaa waxaa dheer in innaga Diinteenna Islaamku ayba inaku dhiirri gelisay mabda’aas intaba uusan ka hor imanayn shareecada Islaamka.
Haddaba, marka aynu mabda’aas kaduulno iyo in la wada hadlo oo kaliya, waxaan leenahay shirka djibuti manta kasocdaa waa la aqbali karaa. Laakiin wada hadalku hadaf isagu ma ahan ee waa wasiilad lagu gaarayo himilooyin dani/faa’ido ugu jirto dhinacyada wada hadlaya. Haddiise faa’ido la hubo aysan ku jirin sidaba ka muuqata kan Djibuuti ma ahan in laga qayn galo. Maxaa jira, waxaa isla markaba isa soo mutaxaya su’aalo fara badan oo jawaabo lagu qanco in loo helaa aysan sahal ahayn oo ku xeeran jawiga shirka iyo dhinacyada kawada qayqaadanaya.
Waa marka 1aade shirkan yaa qolyaha is haya u qabtay oo xakam iyo dhexdhexaadiye ka ah!! Maxaase laga filan karaa!!. Ma qolo inagu cusub baa, mise waa qolo kamid ah kuwii ina soo daaliyey dhibka ina haystana qayb ka ah. Horay waxay doonaanba ha ahaadeene hadda ma daacad maka yihiin xal Soomaaliyeed, danta ugu jirtaase maxay tahay xalkeenna!!!!.
Marka 2aad, yaa loo qabanayaa shirka oo is haya: ma Soomaaliya iyo Itoobiya, mise “bulshada caalamka” iyo Maxkamadaha, mise Isbahaysiga dib u xoraynta qaybtiis iyo Embagathi. Mise mise mise-----------.
Sida aynu uga baranay siyaasadaha reer galbeedku hadba waxay diiradda saaraan kolba meesha ay isleeyihiin khatar ayaa idiinka soo wajahan. Muhiimna ma ahan in khatartaasi ay tahay mid dhab ah iyo in kale midna, ee waxaa iyaga agtooda muhimmaddu tahay tuhmo iyo tolow meel hebla maxaa laga filan karaa. Sidaas awgeed, ayaad arkaysaa iyaga oo meelo aan waxba ka jirin innaga (sida loo badanyahay) sida ay inoogu muuqato aad u buun-buuninaya.
Taa macnaheedu ma ahan in ay wax bilaash ah ka cararayaan ama bilaash faytayaal yihiin, laakiin waxaa ka dhab ah oo aysan marna ogolayn in cid ay si sahlan meel ugaga soo baxdo oo markaas intay doontaba ha le’ekaatee ay lumiyaan waxyar oo ka mid ah caalamka ay ku amar kutaagleeyaan. Taasaa keentay in Taalibaan la rido oo dalkoodii la qabsado. Taasaa keentay in Ciraaq
la qabsado Saddaamna la dal-dalo. Waa midda dhalisay in Xamaas ayaad doora teen loo ciqaabayo 1,5 milyan Falastiiniyiin maato iyo dad jilicsan ah oo ku nool Qaza. Waana isla tan sababtay in Maraykan uu baadiyaha Kismaayo Thomahock iyo cruzz misileska kala dul kici la’yahay.
Golaha Amaanka oo dhab ahaantii istaahila in loogu yeero Golaha Rucbiga iyo argagaxa ee Quruumaha midoobay (riddoobay) ayaa isugu yeeray qolyahan shirsan baa la yiri. Isla iyaga oo fadhiyana golahan ayaa go’aamiyey in Xeebtii dheerayd ( in ka badan 3000 mile dhere ah + 300 mile ballac) ee Soomaaliya Maraykan hibo loo siiyo. Shirka oo aan wali soo gaba gaboobinna waataa maraakiib dagaal la ciir-ciirtay. Waa yaabe ma iyagaa marna xakam ah marna muddaci. Yeelkoode dadku waxay isweydiinayaan, xaqna wey uleeyihiin in ay isweydiiyaan, ma taxaalufkii dib u xoraynta aan ku ogeyn ayaa dib u gumeyn qayb ka noqday, oo sandareertadii ay iyagaoo intan ka awood liita iska diideen shacabkuna ku garab istaagey ayey maanta oo guushaba ay saacad adkaysi ihi naga xigto u hanqal taageen.
Hashu maankayga gaddaye ma masaar bay liqday, waxaan u deynayaa Sh. Shariif iyo Dr. Geelle bal isu kaaya waafajiyaan.
Dhnaka kale, tanaasulku iyo wax isu ogolaanshuhu isna waa mabda’ asaasi u ah wada hadalka iyo wada xaajoodka, la’aantiisna aanay macno lahayn in la wada hadlaa. Hase yeeshee, waxaan illaa iyo hadda caddayn cidda la wada hadalsiinayo iyo barnaamijka laga wada hadlayo toona, dood iyo halxiraale ayaana ku xeeran.
Haddiibase aan kusoo ururinno Isbahaysiga iyo qolada embgathi ay wada hadlayaan (walow aysan sidaas sax kuwada ahayn), barnaamijkuna yahay sidii Xabashida dalka looga saari lahaa waa sida heestu u dhacaysee, Waxaa muuqata in ay jiraan arrimo intaa kabadan oo keenaya horseedayana shaki iyo walwal laga qabo xubnaha Isbahysiga madasha shirka ka jooga iyo qorshahooda .
Akhristaha sharafta lahow waxaad bal inyar dib u jalleecdaa shirarkii noocan ahaa (in kastoo wadcigu sidan ka badalnaa) ee lagu qaban jirey Khartuum iyo shuruudihii labada kooxood ay kala wateen (Embgathi iyo Midowgii maxkamaduhu).
Kooxda Embegathi Khartuom:- Waxay kudoodayeen in MMIdu marka hore Aqoonsat, kana mid noqoto “Xukuumadda” , kadibna laga wada hadlo arrimaha amniga la xiriira, sida saarista ciidamada Xabashida.
Maanta (Djibuti) oo ay kasoo wareegtay sannad iyo bar ku dhowaadna shuruudaha ay Djibuti keeneen waa isla kuwii. Sidaa awgeed, dhankooda wax is badal ahi kuma iman, marka laga reebo hebellada hadda jooga oo qaarkood aanay Khartuum joogin.
Bal dhanka Isbahaysigana aan eegno, Shalay:-
§ Wax wada hadal ah ma jiraan inta ay ciidamada xabashidu dalka joogaan.
§ Maanta iyo jibuuti:- war kale ayaa jira. Oo Isbahaysigii qaybta shirka joogtaa waxay maraysaa in ay aqbalaan wixii ay sannad ka hor diidanaayeen sababuhu waxay doonaanba ha ahaadeene.
Si kastaba ha ahaatee, isabadalka noocan oo kale ah ee xagga mabda’a dadka kuma yimaaddo iyaga oo wali niyad wanag iyo ka duulaya xeerinta danta guud. Probabilityga ay ku dhacdaana waa mid aad iyo aad u liita. Waxaana lagu tilmaami karaa oo kaliya marka la adeegsado luqadda casriga ah: is miidaamin siyaasadeed (political suicide) iyo gobonimada oo la iibsado Waxaana ka dhalanaya raad iyo natiijooyin aad u xanuun badan. Haddaba inta aanan u galin natiijooyinka ka dhalan kara waxa kasocda Djibuti. Bal aan yara milicsanno faqrooyin ka mid ah xeerka Isbahaysiga oo isbadal yaab badani uu ka muuqdo, in ka yar muddo sannad ah.
1. Dib u xoreynta dalka iyo dib u heshiisiin dhab ah oo u danaynaysa shacbiga soomaaliyeed. Waxay ahayd ujeedooyinkii Ururka (waxaa lasameeyey 13/09/2007) sida uu qeexayo Qodobka 6aad ee xeerka ururku.
2. Xoojinta muqaawamada iyo la dagalaanka cadowga si looga xoreeyo dalka. QODOBKA. 7aad Sida Isbaheysigu ku Gaarayo Ujeeddooyinkiisa.
Waxaynu barbar dhigaynaa mowqifkii uu Shariifku ka akhriyey Djibuti 26/05/2008:-
1. Isbahaysiga dib u Xoreynta Soomaaliya waa urur Siyaasi ah oo nabadeed oo la dhisay in uu fagaarayaasha caalamiga ah ku metelo bulshadda Soomaaliyeed, isla markaana Beesha Caalamka ka dhaadhiciyo qadiyadda Soomaaliyeed ee dolman.
2. Ujeeddooyinka Isbahaysiga waxaa ka mid ah ka shaqeynta sidii ciidanka Ethiopia waddanka looga saari lahaa dariiq kasta oo suurto gal ah, sida ku cad xeerka Isbahaysiga qodobadiisa 6,7,8. Dariiqooyinkaas waxaa ka mid ah in Beesha Caalamka laga fahamsiiyo aragtida Isbahaysiga ee ku aaddan xal u helidda mushkiladda Soomaaliya.
Labadan qodob ee dambe waxay ka mid ahaayeen hadaladii uu baaq ahaanta usoo jeediyey Sh. Shariif isaga oo suuq u doonaya qorshaha garabkiisa iskana indha tiraya waxa dhabta ah ee jira. Walibana isku dayaya in uu taageero iyo garab istaag kaga helo Bulshada Soomaaliyeed ee muqaawamada iyo halganka dhimashada, dhaawaca iyo burburka faraha badan ugu kacay ee ay kaga soo horjeedaan gumeysiga Xaba shida iyo daba dhilifyadooda soomaalida ah. Nasiib xumo Shariifku waxaa uu illowsanyahay ama is ilowsiinayaa in Bulshadu aanay maanta rag u dagaalamayn ee ay mabda’ iyo caqiido u dagaalamayso. Sidaa awgeed, aysan kala jeclayn isaga iyo Max’ed dheere ama isaga iyo C/hi yuusuf marba haddii dhufayskoodu mid yahay. Si kastaba ha ahaatee, marka laga yimaado Shariifka ixtiraam la’aanta iyo sida foosha xun ee uu u yasay Bulshada Mujaahidadda ah, (inkasta oo Alle mahaddii ay ku hungoobeen) waxaa uu si cad been uga sheegay qodobadii u dhignaa Ururka uu sheeganayo in uu ku hadlayo magaciisa. Kaasoo aanay meelna kaga jirin xeerkiisa inuu yahay “Urur siyaasi ah oo nabadeed” iyo in loo dhisay sida uu sheegay in uu fagaarayaasha caalamiga ah ka dhaadhiciyo qaddiyadda Soomaaliyeed. Dhab ahaantii waa hadal aad u jaban kana turjmaya niyad xumo iyo u hanqal taagid wax aan jirin.
Waliba waxaa intaa dheer oo sii qeexaya heerka sakhifnimadu ka marayso kooxdan waraysiga Shariif Xasan ee uu ku muujiyey ilaa xadka ay diyaarka u noqdeen in ay qaddiyadda Ummadda ka dhillaystaan, markii uu ka hadlayey in xitaa ay qabaan/doonayaan in aan waxba laga soo qaadin oo la iska illoobo wax alliyaale iyo wixii xasuuq, burburin iyo gumeysiba leh ee ka taagan Dalk eennii hooyo.
Haddaba, marka aad isu akhrido afarta qodob ee laba labada isula socda waxaa isla markaba kuusoo baxaya xawaaraha uu jaray isbadalka ku yimid Shariifka iyo bahdiisa. Sidaa awgeed, niyad wanaag, danta guud iwm. waa waxa ugu dambeeya ee lagu sheegi karo. Sababkuna sida qorraxdaas oo kale ayuu u muuqdaa, umana baahna in qofku cabqari siyaasi ah noqdo si uu u fahmo waxa jira.
Nin meeli u caddahay meeli kamadow waa dhab. Maxay tahay waxa ku kallifaya in ay raggii ay “Cadowga” isu ahaayeenna ilaa xadkaas u tanaasulaan, ilaa ay yiraahdeen waan iska cafinay. Isla markaasna kuwii ay dhufayska kuwada jireenna iska daa tanaasule ay in la wada fariisto oo la wada hadlo boqolaalka mayl uga fogaanayaan. War hoy timir laf baa ku jirta.
Haddiiba sidaas xaal yahay, oo Sh. Shariif iyo Dr. Geelle iyo inta wehelisaaba ay hadda ku hawllan yihiin, kana doodayaan jagooyinkii ay xukuumadda Embgathi ka kala qaban lahaayeen, waa sida muuqata e, isla markaasna ay turxaan bixinayaan siiqadii iyo habkii Gabre reportka aroor iyo galabba ay u siin lahaayeen iyo meesha
Waxaase laga yaabaa in dadka qaar is leeyihiin nimaka waa lagu xad gud bayaaye sow kuwan shuruudda ka dhigay in 120 maalmood gudahood Xabashidu kaga baxaan Dalka (laga bilaabo marka hesshiiskan lakala saxiixdo). Laakiin, waxaysan inoo sheegeyn in aysan dalka ka baxayn illaa ay yimaaddaan ciidamadii badali lahaa.
Taasina qofkii wax kala garanaya waa u caddahay in aanu shardigaasi suurto gal ahayn. Haddii ay jiraan cidamo imaanayaa ay jiraan mar hore ayey iman lahaayeen.
Tan kale, sow tii aan (yaa Shariif) ku luuqaynaynay in aanay inoo kala duwanayn ciidammo ajnabi ahi. Waxaan leenahay shakliyaadka iyo waxyaalaha aan aasaaska ahayn oo la buunbuuniyaa inta badan waxay dad fara badan ula ekaataa mabda’ iyo asal. Waana hadafka qoladani iyo ujeedada ay ka leedahay kooxdani marka tooshka ay inoogu iftiiminyaan dhalanteed iyo wax aan meelna sii jirin.
Arinta manta taagan waxaa asal iyo asaas u ah wada hadalka laftigiisa. In la ogolaado wadahadal lala galo Xabashida iyo daba dhilifyadooda inta ay ciidda Soomaaliya meel kamid ah ay joogaan, waana mowqifkii aan ku ogeyn Ururka dib u xoraynta intii aanay qaybta Shariif garabkeenna ka bixin.
Miraha haddaba laga guran doonaa mowqifkan gurracan haddii uu hirgalo, marka laga hadlayo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna Muqaawamada iyo meelaha ay ka jirto waa kuwo dhadhan xun oo aan marna marayn jidiinka Bulshada Mujaahidadda ah.
Waxaanse si aan sawir qumman oo dhammays tiran u helno doonayaa in aan isku xirno dhowrka shay ee kala ah:- Muqaawamada, Maraakiibtan dagaalka ee badda Soomaaliya iyo natiijada wada hadalkan Djibuuti oo sida lagu wado laba mid uun kasoo baxayso.Aqoonsiga kooxda Embgathi ay qoladani aqoonsato kana mid noqoto oo isaga waqti uun inaga xigo.
Amabase in ay ka faa’ideystaan fursadda kale ee kali ah ee loo soo bandhigay (waa haddii ay wax qaybsiga iska diidaan) Shariifkuna uu Bayaankiisa u dam beeyey ugu gogol xaarayey waa aqoonsiga kooxda Embegathi iyaguna ay noqdaan urur “siyaasi ah” oo nabadeed oo mucaaradna ah, dibadahana meeraystana ay noqdaan.
Isku soo duuboo aqoonsiga kooxdani waxaa uu Rupper stamp/tiimbare u noqon doonaa, gacanna bannaanaynayaa, waji gabaxii iyo kalsooni xumadii caalamka ka haysatayna kasaarayaa Maraykanka iyo xulafadiisa Nato guud ahaan oo muddaba raadinayey kuna taamayey wax uun shaciyad ah oo ay ku xasuuqaan inta ka hartay Ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan dhaqdhaaaqyada (Alle kama dhigee) Muqaawamada oo loogu marmarsoon doono in ay xalka iyo nabaddaba diidan yihiin, maadaama ay ka bari noqdeen shirkan iyo qolyaha ka qayb galayanba. Sidoo kalena ay sheegeen in aysan u hoggaansami doonin waxa kasoo baxa iyadoo waliba “madaxdoodii” ay ogolaatay. Sidii aan bilowgii soo tilmaamayna Maraakiibta dagaalka oo gaalada reer Yurub ee soo buux dhafiyey Badda Soomaaliya shaqo la’aani mahayso. Sikastaba ha ahaatee, inkastoo aan Bulshada Soomaaliyeed aysan marnaba ka filanayn in hoggaamiyhii ay aamintay iyo ururkiisii ay k aga timaaddo dhagartii ugu weynayd ee taariikhda Bulshada Soomaaliyeed ee qoran.
Su’aasha ugu dambaysa ee aan qoraalkeennan isku weydiinaynaa waxaa weeye:-
Waa maxay sababka ku kalifaya Sh. Shariif isbaddalka intaa le’eg ee xagga mabaadii’da ah. Ma cabsi iyo baqdin baa, oo waxaa lasoo hordhigay filmkii daldalaaddii Saddaam Xuseen, oo baryahan dambe noqotay isha cali kalulata.
Mise markii hore ayuu waalnaa, Mise hadduu waallan yahay, mise waa maadays adduunyadu dadkuna wey matalayaan. Mise-------
Anigu qof ahaan Sharrif wax badan ayaan is maqalnay oo aan telefoon kuwada hadalnay wada shaqaynna way na dhex martay intii ay socdeen howlihii la dagaallanka Qab-qablayaasha iyo intii ka dambaysayba oo lagu jirey dib u xoraynta Dalka, inkasta oo aannaan marna is arkin.
Sidaa awgeed mowqifkani ma ahan kuwii aan Shariif ku aqaannay kuna ogaa sida Bulshada inteeda kaleba. Sikastaba ha ahaatee, waxaanan u rajeynayaa in ay dhabta usoo noq daan isaga iyo inta markii horeba diinta lagu aaminay. Haddise ay sidaa ku adkaystaan, waxay ogaana yaan marka danta manta laga leeyahay ay meesha ka baxdo
C/karim Xirsi Salaad
Faafin: SomaliTalk.com | June 14, 2008